DOOLOW: Jeneraal Fartaag oo weli ku sugan degmada Doolow iyo kulamo gaar gaar ah oo ka soconaya halkaasi
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubba Jeneraal Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil(Fartaag) ayaa ku sugan weli degmada Doolow ee gobalka Gedo oo baryihii dambe uu ku sugnaa. Wafdigii maamulka Jubba ee uu hoggaaminayay shalay ...
DAAWO: Taariikhda magaalada Garoowe ee caasumadda Puntland oo laga sheekeeyay (Muuqaal)
DHAGEYSO: Suldaan Beyle oo dhaliilay odayaasha ku shirsan magaalada Dhuusamareeb + Dhaliilo kulul
Mid ka mid ah salaadiinta ku sugan degmada Cadaado ayaa sheegay in maalinta berrito ah uu ka furmayo halkaasi shirka maamul u sameynta goballada dhexe. Suldaan Cabdicasiis Cumar Daad Suldaan Beyle ...
“SAWIRRO” Wasiirka kalluumeysiga oo la kulmay howlwadeenada Wasaaradda
Wasiirka Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, ayaa maanta kulan looga hadlayey dar-dargelinta howlaha qorshe ee Wasaaradda la qaatay Maamulka iyo howlwadeenada Wasaaradda. Mudane Maxamed Cumar Caymooy Wasiirka Kalluumeysiga ...
TOP DHAGEYSO: Xukuumadda Cumar Cabdirashiid oo wada qorshe maamul Federaal ah looga hirgalinayo caasimadda MUQDISHO
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xildhibaanno dowladda kulan kala yeeshay dhismaha maamul cusub iyo dagaalada degmada Guriceel. Xildhibaannadan oo gaarayay 20 xubnood ayaa kulanka ay Ra’iisul wasaaraha la yeesheen kala hadlay arrimo ...
TOP DAAWO: Maamulka Somaliland oo bahdilay Dowladda dhexe kana hadlay wada hadalada Turkiga
DHAGEYSO: Afhayeenka ciidanka xoogga dalka G. Gedo oo beeniyay in taliyihii ciidanka ay xireen KENYA
Afhayeenka ciidanka dowladda ee gobalka Gedo ayaa been abuur ku tilmaamay wararka sheegaya in taliyihii ciidanka ee gobalkaasi ay xirteen saraakiisha Kenya. Col. Jaamac Muuse oo ku sugan magaalada Garbahaarey ayaa ...
TOP DHAGEYSO:- Yuusuf Ducaale ”Shirka Cadaado kama qeyb galayno beelo badan ayaana nahay ma doonayno”
Mid kamid ah Waxgaradka ka qeyb galaya shirka Dhuusamareeb ayaa sheegay in aan lagu soo wargalin furitaanka shirka maamul u sameynta goballada dhexe. Nabadoon Yuusuf Warsame Ducaale ayaa sheegay in weli ...
DHAGEYSO:- Ciidamo AMISOM ah oo la gaynayo magaalada Cadaado
Saraakiil ka tirsan Ciidamada AMISOM ayaa gaaray Magaalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud si ay usoo qiimeeyaan Xaalada Goobaha lagu qabanayo Shirka Maamul u sameynta Gobolada Dhexe ee Dalka. Saraakiishaan ka tirsan ...
DHAGEYSO:- Ahlu Suna oo dowlada ku eedeysay inay doonayaan inay bur buriyaan ururkooda
Ururka Ahlu Sunna, ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya juhdi badan ay ku bixinayso dagaalka ay kula jirto garab ka mid ah Ururkaasi oo Dowladda ay isku hayaan Magaalada Guriceel ee ...